दौड प्रतियोगिताले राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्नेछ ः अध्यक्ष बस्नेत | Mechikali Daily
दौड प्रतियोगिताले राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्नेछ ः अध्यक्ष बस्नेत
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: १३ पुष २०७४, बिहीबार १२:२४
बुटवल÷मदन भण्डारी स्पोर्टस् ऐकेडेमी बुटवल उप–महानगर कमिटीको आयोजनामा बुटवलमा आउँदो शुक्रबार तेस्रो बटौली ५००० हजार मिटर अन्तर मावि स्तरीय प्रतियोगिता हुँदैछ । प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको ऐकेडेमीले जानकारी दिएको छ । खेलकूदलाई जीवनको अंग बनाऔं, शान्ति र मित्रता कायम गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । विशेष तह विद्यालय क्षेत्रबाट नै योग्य र इन्छुक खेलाडीको पहिचान गराउनु पर्छ । भन्ने मान्यता एकेडेमीको छ । प्रतियोगिताको लक्ष्य दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्ने पनि रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा मदन भण्डारी स्पोर्टस् ऐकेडेमी बुटवल उप–महानगरकमिटीका अध्यक्ष विकासजंग बस्नेतसँग मेचीकाली दैनिकले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप
विगत तीन वर्षदेखि लगातार तपाईहरू यो प्रतियोगिता गर्दै आउनुभएको छ । प्रतियोगिताको खास उद्देश्य के हो ?
हाम्रो संस्था (मदन भण्डारी स्पोर्टस् ऐकेडेमी) नै खेलकूल कार्यक्रम गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । खेलकूदलाई जीवनको अभिन्न अंग बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । यसले आत्मियता बढाउँछ , मित्रता कायम गर्छ, दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्छ ।
प्रतियोगितामा कति खेलाडीहरूले भाग लिँदै छन् ?
प्रतियोगितामा अहिलेसम्म १ सय ५० जना प्रतिस्पर्धीले सहभागिता जनाउने हामीसँग नाम दर्ता गराएका छन् । यसबाहेक अन्य प्रतिस्पर्धा विद्यार्थीहरू पनि थप हुने सक्ने हाम्रो अनुमान छ ।
किन दौड प्रतियोगिता नै रोज्नु भयो ?
दौडको प्रतिस्र्धालाई खासै कुनै अभ्यास नंै चाहिँदैन । सबै विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाउन सक्छन् । त्यसैले हामीले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको सहजताका लागि दौड प्रतियोगिता नैं रोजेका हौं ।
ऐकेडेमीले आर्थिक तथा अन्य समस्याका बाबजुत पनि सबैलाई खेलप्रति जागरूक गर्ने उद्देश्यले दौड प्रतियोगिताबाट आफ्नो खेल, खेलाडी अभियानलाई अग्रता दिइएको हो । दौड प्रतियोगिता लगतै यही पुस १८ र १९ गते बुटवलमै फुटसल प्रतियोगिता पनि हामीले राखेका छौं ।
यो प्रश्न जसले पनि सोध्ने गर्छन् । खेलसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई ल्याएमा राम्रो हुने थियो । तर यो अहिलेको लागि सम्भव भएन । हामीले तुरून्त प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरियो । समयको अभावले गर्दा धेरै खेलसँग सम्बन्धित आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई स्थान दिन सकिएन । हामी यसप्रति क्षमाप्रार्थी छौँ । हाल यो प्रतियोगिताको लागि रूपन्देहीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद, लिला गिरी र भोजप्रसाद श्रेष्ठमध्ये एक जनाबाट गराउने हाम्रो तयारी छ ।
प्रतियोगिता कति बजेबाट सुरू हुँदैछ ?
शुक्रबार बिहान ठीक सात ३० बजे बुटवल योगिकुटीमा प्रमुख अतिथिले रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुहुन्छ । उद्घाटनपछि ट्राफिकचोकमा बिजेताखेलाडीहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ ।
हामीले दौडतर्फ प्रथम पुरस्कार ८ हजार ८ सय ८८ रूपैयाँ राखेका छौँ । त्यस्तै दोस्रो रु. ५ हजार ५ सय ५५ र तेस्रो हुनेलाई ३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ नगद, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै फुटसल प्रतियोगितमा प्रथम हुनेलाई २० हजार, दोस्रोलाई रु. १० हजार र तेस्रो हुनेलाई २ हजार नगद, कप, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार दिइनेछ ।
प्रतियोगितामा राजनीतिक दलका नेताहरू आउछन् कि आउदैनन् ?
ऐकेडेमीका अञ्चल र जिल्ला स्तरका नेताहरू, पार्टीका जिल्ला तहका नेताहरू, विभिन्न संघ संस्था र अन्य पार्टीका नेताहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ ।
खेलकूद नै जीवनको अभिन्न अंग हो । बाल्यकालदेखि नै सुरू हुने खेललाई हामीले युवा र वृद्ध अवस्थामा भुल्दै गएका छौँ । यसको असर वृद्ध अवस्थामा पार्दैछ । हामी जुनसुकै शारीरिक अभ्यासलाई खेलको रूपमा परिभाषित गर्दछौँ । खेल नै शारीरिक व्यायाम हो । हामीले कुनै पनि कार्य गर्दा व्यायाम हुन्छ । त्यसैले दौड पनि एक शारीरिक व्यायामका रूपमा हामीले लियौँ र दोस्रो पटक प्रतियोगिताको आयोजना गरेका हौँ । अन्त्यमा हाम्रो विचारलाई जनसमुदायसमक्ष पु¥याउनु हुने तपाई र तपाईको लोकप्रिय पत्रिका मेचीकाली दैनिकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।